Ngwurugwu 24 kachasị mma Idebe echiche maka ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị - Atụmatụ Echiche Tattoos
Ihe kachasị mma 24 Ebumnobi Idebe maka Ụmụ nwoke na Ụmụ nwanyị
Mgbe a bịara n'igosi tattoos, e nwere ọtụtụ narị atụmatụ ịhọrọ. Enweghi ihe okike ma obu udi nke anyi huru na aru ndi nwoke na ndi nwanyi.
Ụdị ntuchi ebighi ebi
Egwu ndị na-adịghị mma bụ n'ezie na akụkụ a ma ama n'ihi nkọwa ọ na-eweta na tebụl. Ọnwụ ahụ na-anọchite anya nọmba 8 ma nwee ọpụrụiche ya mgbe ọ na-adịghị agwụ agwụ na-eme ka ọ bụrụ ihe onye ọ bụla chọrọ ịghọta ma soro ya. Ebumnuche na-enweghị ngwụcha nke egbu egbu na-anọchi anya bụ ihe ị ga-ahụ maka ya. Ọ na-anọchite anya ịlọ ụwa ma ọ bụ ịmaliteghachi na omenala ụfọdụ.
A na-ahazi egbugbu ahụ dị ka ndụ, ọbụbụ ọbụbụ ịhụnanya. Ọnwụ ahụ na-egosipụta obi ma ọ bụ ọbụna kpakpando. Ogbugbu #infinity bụ ihe ị nwere ike iji na-ebugharị ozi ahụ dị ike nke na-achọ ọha na eze.
Ọ dịghị onye na-eme ya ka ọ dị mma ma a bịa n'ihe banyere igbu egbugbu. Otú e si kee ya na ihe nyocha nke mgbakọ na mwepụ nke ọ na-ekwu maka ya. Ọdịnihu #tattoo aghọwo ụdị ozi pụrụ iche nke na ụmụ nwoke na-ahụ n'anya na-agwa ndị mmekọ ha mkpebi ha ịdị mma karia ha. Ogbugbu a na-ebighi ebi na-abata na ụdị na nha. Enwere ike ịgbasa ihe a mgbe ọ gbakwunyere ihe ndị ọzọ iji mee ka ọ dị iche na ihe dị ịtụnanya.
1. Mkpịsị aka akara mkpịsị aka maka onye ọ bụla
Ogbugbu na-adịgide adịgide nwere ike jiri nwayọọ nwayọọ na-agwụ na nká ma o nwere ike ọ gaghị apụ n'ahụ ya ma e wezụga mgbanwe dị ukwuu. A pụrụ iji ọgwụgwọ laser mee ihe ma ihe mgbu nke ejikọrọ na usoro ahụ bụ ihe na-enye nsogbu.
2. Nwepụta ejiji egbuke egbuke maka ụmụ nwanyị nwere ozi pụrụ iche
Nke a bụ ihe mere ndị mmadụ ji atụ egwu ịga maka ụdị egbu egbu a. Ọnụ ego nke ime nke a dịkwa oke ọnụ nke bụ nkwụsị.
3. Akụkụ nke egbuke egbuke egbuke egbuke echiche na aha maka ụmụ agbọghọ
Enwere ike iwepụ egbugbu na-adịru nwa oge. A na-etinye pigmenti n'ahịrị akpụkpọ ahụ dị n'èzí bụ nke na-ahapụ agba agba agba. Ị ga-aghọta na ị nwere ike idafu ụfọdụ akpụkpọ anụ gị mgbe ewepụrụ ya.
4. Enwere olileanya ichochi egbugbu maka ụmụ agbọghọ na nkwojiaka
Echegbula banyere mkpụrụ ndụ akpụkpọ anụ ndị furu efu n'ihi na ha ga-etolite n'ime obere oge. Ọ bụrụ na ị na-eche na ị ga-egbu egbu egbu a ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ ihe ịchọrọ ịchọrọ ogologo, gaa maka nhazi oge.
5. Ntube egbuke egbuke na-egbuke egbuke maka ụmụ nwanyị na nkwojiaka
Ihe ndị na-akpata mgbe a na-egbu egbu na-adịru nwa oge adịghị atụtụle ya na igbu egbugbu na-adịgide adịgide na-ewe oge iji gwọọ ya mgbe ewepụsịrị ya. Okwesighi ka i mee ngwa ngwa iji nweta egbu egbu na-adighi ebi ma o buru na i kpebiri banyere imewe.
6. Akụkụ nke egbuke egbuke egbugbu echiche na ozi maka ụmụ agbọghọ
Ogbugwu a na-ebighi ebi emeela site na onye na-ese nkà nke mere ọrụ dị ịtụnanya na echiche nke onye ọrụ ahụ.
7. Echegbu egbugbu echiche maka ụmụ nwanyị
Ị gaghị enwe ihe mgbu ma ọ bụrụ na ọ bụ nhazi oge. Otú ọ dị, maka ndị chọrọ ịchọta egbu egbu na-adịru mgbe ebighị ebi, ị kwesịrị ịdị njikere ịtachi obi na mgbu n'oge iwepụ ya.
8. Ebube ebighi ebi tattoo echiche na ozi, M hụrụ Jekọb maka ụmụ agbọghọ
Echefula banyere ọbara efu mgbe ọ na-abịa na nwa oge #design n'adịghị ka nsụba egbu egbu na-adịgide adịgide.
9. Uche na-egbuke egbuke egbugbu echiche maka ụmụ agbọghọ
Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị ahụwo ndị mmadụ ka ha na-egbu egbu egbugbu n'ihi na ọ dị mma na akpụkpọ ahụ. E nwere ụdị dị iche iche nke na-abịa na egbugbu ebighi ebi.
10. Akara ejiji egbu egbu maka ụmụ nwanyị nwere ozi
Ị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ gbanwee ụzọ nke egbugbu na-enweghị atụ dị. E nwere ndị chọrọ ịhazi ụdị egbugbu ha na-adịghị mma ka ha dị iche na ọha.
11. Egwu egbuke egbuke echiche maka umu nwanyi n'azu
Ogbugbu ebighi ebi aghọọla ihe na-emekarị ka ọ ghara ịla n'iyi ruo ọtụtụ afọ. Ihe kpatara nke a bụ n'ihi otú ndị mmadụ na-esi abịa na-apụta ìhè. Ị nwere ike ịgbakwunye ụcha ma ọ bụ ọbụna na-agbagọ ka ụdị egbu egbu gị dị.
12. Ntuchi egbuke egbuke egbuke egbuke umu nwanyi
13. Nnụnụ na-efe efe ma na-egbuke egbuke egbuke echiche maka ụmụ agbọghọ na azụ
I nwere ike ikpebi ịnwe ụdị igbu egbu ọ bụla dịka ihe ịchọrọ ịkọ. O nwere ike ịbụ akụkọ, ihe nkuzi ma ọ bụ ọbụna nchetara ihe ịchọrọ ka ị ghara ichezọ. isi iyi
14. Mkpịsị aka mkpịsị aka mkpịsị aka na mkpịsị aka
Mgbe a na-ahọrọ ịhọrọ ntutu dị ka nke a, ọ na-ewe ọtụtụ njikere iji nweta gị ihe mara mma dịka akara ngosi a na-ejedebe. isi iyi
15. Mkpụrụ obi na nkwụsị azụ azụ echiche maka ụmụ agbọghọ
Akwụsị ebighi ebi pụtara ịrị elu nke nwere ike iji mee ihe iji kwuo gbasara njedebe na-adịghị agwụ agwụ ma ọ bụ mgbe ọnụọgụgụ ahụ, 8. isi iyi
16. Echiche egbugbu na-adịghị mma maka ụmụ nwanyị
Ọnwụ a aghọwo ihe na-emekarị n'ihi na ọbụna ndị di na nwunye na-eji ha eme ihe. Ndị mmadụ na-ejikarị obi eme ihe ma ọ bụ ọbụna na-adaru nso na mkpịsịghị mma ha na-enweghị atụ iji gosipụta mmasị ha. isi iyi
17. Akụkụ nke okike ink na-egbuke egbuke maka ụmụ agbọghọ
Enwere ike iji akara amaghi aka mee ihe n'etiti ndi di na nwunye ma onye obula nke kwere na ihe apughi ime. Ndị a egbu egbu egbu, ihe ọ bụla ga-ekwe omume. isi iyi
18. Uche na egbuke egbuke egbuke egbuke nke nwoke na ụkwụ
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịchọta ihe ọtụtụ ndị na-adịghị enweta ma ọ bụ ọbụna na-agbalị ịgbochi ihe ọ bụla, gaa maka egbu egbu a. Nke a bụ ihe mere egbu egbu ji adị taa. isi iyi
19. Nnụnụ na-efe efe na mkpịsị aka na-egbuke egbuke maka ụmụ nwanyị
Maka ụmụ nwanyị, a pụghị ileghara egbugbu a anya maka ịma mma ya. Ịnwere ike ịgbakwunye ihe ndị e kere eke ma ọ bụ ọbụna atụmatụ ya n'akụkụ ya. isi iyi
20. N'aka ịhụnanya na-ejighị aka na-egbu egbu ink echiche maka nwanyi ogwe aka
Ọtụtụ ndị di na nwunye ga-ahụ nke a n'anya. Ojiji nke ima ima ihe na etu esi ede okwu n'elu egbu egbu na-eme ka o nwee mmasi. Ị ga-ahọrọ otú ị chọrọ ka egbu egbu gị. isi iyi
21. Egwuregwu na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke na ozi
Na azụ, a pụrụ iji egbugbu na-ebighebi na-ejikọta ya na onye ọ bụla. Ndị inyom a ji ya mee ka ọ dịka ụmụnne. Enweghị ihe ọ bụla na-egbochi gị ịgbakwunye ihe ndị mara mma na nke gị. isi iyi
22. Ogbugbu egbu egbu egbugbu akara maka onye ọ bụla
Ọ nwere ike ịbawanye mma ma a bịa n'ikpa aka na njedebe na ikpere. Echiche ya na ụzọ okwu na nnụnụ si jiri ozi pụrụ iche mee ka ọ bụrụ ihe dị iche. Ị nwere ike ide okwu ndị mara mma nke ga-akpali gị imekwu mma egbugbu gị. N'ezie, ọ dị anya ịhụ gị ịgụ. isi iyi
23. Nnụnụ na-efe efe ma na-egbu egbu azụ maka ụmụ nwanyị
Ma eleghị anya, azụ nwere ike inye gị ụdị ihe ahụ ị hụrụ n'anya nke ukwuu. isi iyi
24. Echere na-egbuke egbuke egbuke echiche maka nwa agbọghọ ahụ
Ma ọ bụ ọbụna ogwe aka ebe akara egbu egbu na-enweghịzi ike ịrụ ọrụ pụrụ iche. isi iyi
Pịa ebe a maka Ndị ọzọ na-egbu egbu egbu
Tags:egbu egbu ebighi ebi
egbu egbu diamondakpị akpịegbu egbu okpuokpueze okpuezeNtuba ntughariaka akaegbu egbu maka ụmụ nwokeUche obizodiac akara akaraụmụnne mgbuegbu egbu ebighi ebiechiche egbugbuenyi kacha mma enyiọnwa tattoosna-adọ aka mmaọdụm ọdụmndị mmụọ oziEgwu ugoegbu egbu hennarip tattoosegbugbu maka ụmụ agbọghọdi na nwunyeegbu egbu mmirindị na-egbuke egbukeGeometric TattoosAnkle Tattooskoi ika tattoon'olu oluỤdị ekpomkpaarịlịka arịlịkaegwu egwumma tattoosagbụrụ ebona-egbu egbuụkwụ akamehndi imeweegbu egbu egbungwusi pusiakara ntụpọegbu egbu osisi lotusnnụnụudara okooko osisiegbu egbuima ima mmaazụ azụenyí egbu egbuaka mma akaegbugbu egbugbuaka akaakwara obi